LCD "currants", ikheli Ekaterinburg, ukubuyekezwa
Ekaterinburg - edolobheni phakathi kwezintaba Ural elinabantu abangaphezu kuka-1.5 million abantu. Kuyinto ezemfundo, isikhungo ngobukhulu angokwesayensi nolwazi. Megapolis lizungezwe ihlathi, sizungezwe emachibini noma emifuleni. It ihlukaniswe yaba ezindaweni eziningana, enye yazo emfuleni ububanzi. Lokho LCD "Currant" (Ekaterinburg) yakhiwa kule ndawo.
Indawo eziyinkimbinkimbi zokuhlala, ukufinyeleleka ezokuthutha
Isigaba sokuqala zokuhlala eziyinkimbinkimbi umnotho kwekilasi ivule kakade izicabha zalo kumakhasimende. Isakhiwo itholakala komakhelwane Okubanzi River emigwaqweni Sukhodolsky shady at ibanga kancane amakhilomitha angaphezu kwayisikhombisa kusukela enkabeni yedolobha. Ukuze ngifike kuleyo LCD "Currant" (Ekaterinburg), indlela elula ezokuthutha emgwaqeni womphakathi, kusukela eziyinkimbinkimbi itholakala endaweni zokuthutha elula kakhulu, okuyinto has ukufinyelela ngqo emgwaqeni omkhulu futhi EKAD. Futhi complex engafinyelelwa ezokuthutha zomphakathi - itekisi. Isikhathi uhambo kuzothatha cishe imizuzu engu-15-20.
Eceleni izindlu liyinkimbinkimbi zezemfundo, eyakhelwe Condo nge ingqalasizinda kakhulu evuthiwe. Neziphathimandla zedolobha uhlela esikhathini esizayo ukunikeza ezokuthutha izixhumanisi omakhelwane esibekiwe futhi, ngokufanelekile, ne-LCD "Currant" (Ekaterinburg).
Kuhaya ukwakhiwa Umakhi RC "Currant" (Ekaterinburg) "Atomstroykompleks" - inkampani emakethe of zokuhlala kanye commercial ingcebo esifundeni Ural zikhona iminyaka engaphezu kwengu-20. Lokhu kukunika nokuqina enkulu nephrojekthi ecacisiwe. Zonke eyenza "Atomstroykompleks" amanani ahlukene ezinengqondo, igxile abasesigabeni esiphakathi sabantu, ukuqaliswa yisikhathi izibopho ukwakhiwa.
Siyoba yini RC "Currant" (Ekaterinburg), ikheli lapho - komakhelwane Okubanzi River? Kuyinto endlini eyodwa, ehlanganisa izigaba ezintathu, eyakhelwe Uhlaka ezinikwe ubuchwepheshe. Phansi - 16-19 izibuya.
Isakhiwo yakhelwe hlelo "Abantu Imitha", ingxenye ukubaluleka yokuhlala ingcebo Isikhwama exhaswe yi-abafundile ngokukhethekile ngaphansi kwazo. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukuba kakhulu ukunciphisa izindleko ngamunye imitha square isikhala ephilayo futhi ahlinzeke izindlu ekilasini umnotho. Ngaphezu kwalokho, amakamelo e unjiniyela sekugcineni esihle, okuyinto iyehlisa abazothenga isikhathi ukulungisa kanye ukushayela.
Amakamelo okulala awabange okuyinkimbinkimbi yokuhlala "Currant" (Ekaterinburg) izokwethulwa ngekwehlukahlukana kwalo: izitudiyo ukuba enamakamelo amane. Le ndawo kulencane kuyoba 33 square metres, enkulu kunazo zonke - engaphezu kuka-90 square metres. Ngakho, wonke umuntu uyokwazi ukuthola izindlu eziyinkimbinkimbi, ihlangabezana ngokugcwele ukunambitheka kwako kanye nesabelomali.
ingqalasizinda Complex: zangaphakathi nezangaphandle
I plus elikhulu, okuyinto Ingabangela okwamanje juqu for ukuthengwa zokuhlala kuleli eziyinkimbinkimbi elalisanda kwakhiwa, ukufaka ezengeziwe umshini ohlanza amanzi izinhlelo. Lesi sici abakwazi ukuqhosha ezinye izakhiwo hhayi kuphela Ekaterinburg, kodwa ngisho nakwamanye amadolobha. Ngaphezu kwalokho, yonjiniyela ennoble ezindaweni zasekhaya, ukusungula zezingane kanye nezemidlalo zokudlala. abanikazi Car uyojabula Surface futhi yokupaka komhlaba.
LCD "Currant" (Ekaterinburg) yakhiwa endaweni yokuchuma okukhulu edolobheni - esifundeni Okubanzi River. Bayanda onjiniyela bakhethe kule ndawo ukuze indawo amaphrojekthi. Eduze eziyinkimbinkimbi, njengoba sekushiwo, kuyinto wesifunda Academic, okuyinto esikhathini esizayo esiseduze sizoxhunywa emzini ezokuthutha izixhumanisi njalo.
Budebuduze eziyinkimbinkimbi, ngaphakathi ukuhamba ibanga kukhona enkulisa, esikoleni, ezitolo nezitolo ezinkulu. "Lenta" hypermarket usebenza. Kulesi endaweni kukhona umtholampilo yezingane.
Umthuthukisi ukwakhiwa isizathu LCD "Currant" (Ekaterinburg) wakhetha indawo Okubanzi River. Kulapha, abanye ibanga kude nomuzi omkhulu, sizungezwe ihlathi, emachibini nasemifuleni, ungaziqhenya emoyeni opholile kanye bewuthanda, ukuhogela ngokujulile. Kule ndawo azikho amabhizinisi zezimboni, okusho ukuthi akukho lutho ephazamisa nokuzwana bemvelo, okudaliwe ngaphandle kokuqondiswa umuntu.
Njengoba kushiwo ngenhla, unjiniyela aklame lesi sakhiwo zonke izinhlobo amafulethi. Kuze kube manje, lo-LCD "Currant" (Ekaterinburg) eseqedile 2 com. Amakamelo okulala awabange konke sathengiswa. Aqhubeka ongakhetha ezimbili lokulala ezimbalwa kuphela unsold. Komncane enamakamelo efulethini elithile eziyinkimbinkimbi lingaphansi kuka 30 square metres. Futhi enkulu - 90 m 2.
Zonke amafulethi efakwe amafasitela kathathu ifasitelana, emnyango metal ephephile basendle, iminyango ingaphakathi. Isakhi wenza yokuqedela sokugcina sokuthi kuhlanganisa Wallpapering for Umdwebo, ebeka laminate. Le phrojekthi sihlinzekela zokugeza ezimbili in the amafulethi (ngaphandle studios) - aphethe kanye guest. Amafulethi asethwe ezimbili-rate ugesi amamitha, amamitha amanzi nokushisa uqhutshwa Izintambo zikagesi ezisobala kanye amapayipi kodwa angabangi umsindo anemisila lokufakwako Inthanethi, ucingo kanye ithelevishini digital.
Izindleko eyodwa imitha square okuyinkimbinkimbi yokuhlala iqala kusukela ama-ruble ayizigidi 41. Eqolo elilodwa elalingaphandle amafulethi ngokwesiko kukhiqizwa.
LCD "Currant" (Ekaterinburg) libuyekeza abathengi kanye nalabo kakade lucky ngokwanele ukungena efulethini siphelile, has ngokuyisisekelo omuhle kuphela. Lokhu kungenxa yokuthi unjiniyela ukhethe indawo efanele eziyinkimbinkimbi abasafufusa indawo ukukhula komuzi. Sekuvele kukhona okuningi kwengqalasizinda, futhi bayaqhubeka yakhiwa, okuyinto kumjabulisa kakhulu ikusasa abaqashile. Ngaphezu kwalokho, abaningi bakhangwa izindleko ezingabizi kakhulu kwezindlu, ngoba yakhiwe ngokuvumelana uhlelo "Abantu Imitha".
Angakuvumela ezindlini buildings sekugcineni esihle unezela kuphela wokubuyekezwa okuvumelekile. Ngokwesibonelo, abathengi abaningi, kokuba etshaliwe cishe yonke imali yabo ukuthengwa ingcebo, ngokuba ukulungisa akazange ashiye noma yini. A umthuthukisi inikeza ithuba ukungena ngokushesha ngemva ukulethwa izihluthulelo abathengi ezindlini.
amakhasimende Ngeneliseke kakhulu futhi ezokuthutha ukufinyelela eziyinkimbinkimbi. Esikhathini esizayo, lapho abhanqiwe nge ifa Academic Okubanzi emfuleni, uzothola ngisho lula. Kodwa manje, ngisho nalabo abangenalo imoto yakho siqu, inkinga akuyona okungukuthi, njengoba cishe ngaphansi amafasitela of the eziyinkimbinkimbi kukhona ezokuthutha stop umphakathi.
Phakathi nemiphumela ethile engathandeki ambalwa Kuyaphawuleka ukuthi benomfutho ezifana izakhiwo endaweni, izakhamizi besaba kubangelwa khona isikole, okuyinto namuhla kuthatha izakhamuzi kancane izakhiwo eziseduze. Nge ukwakhiwa okungenani kwenye okuyinkimbinkimbi yokuhlala izindawo kulesi sikole ngeke kwanele kuwo wonke umuntu.
Ezinye balimi, abathengi ungathandi kusakhiwo ezindlini. Yebo, unjiniyela aklame ezinye zazo ngempela kabi. Kodwa abanjalo uhlela kancane, futhi zibiza kancane. Lokhu kwakubangelwa ukuklanywa ukubukeka kwayo yonke indawo eziyinkimbinkimbi. Ubizwa wakhuliswa uhlobo emincane, ngakho abanye amakhona emafulethini etholwe beveled. Ukunganeliseki futhi abangele kuvulandi - zingabantu ngezinye izikhathi encane kakhulu. Kodwa ukuhlela okunjalo akukhona ukuthuthumela ngokweqile.
"Abadayisi Incom-Real": Izibuyekezo Inkampani - Izinganekwane Namaqiniso
Zhukovsky, izakhiwo: izici, onjiniyela kanye nokubuyekeza
Izizathu eyisikhombisa ezintathu, ukushiya umsebenzi engathandwa
Pushkin: zokutshala nokunakekela. Pushkin (izimbali): Incazelo